भ्यालेन्टाइन : अतीतलाई सम्झी नरोइरहनु तिमी | Ratopati
भ्यालेन्टाइन : अतीतलाई सम्झी नरोइरहनु तिमी
personसञ्जीव कार्की exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २, २०७६ chat_bubble_outline0
भ्यालेन्टाइनको प्रेम उत्सर्ग र विद्रोहलाई जीवित राखेर हर प्रेमी, प्रेमिकामा अमर प्रेम गर्न उत्प्रेरित गर्ने भ्यालेन्टाइन डे इटली हुँदै आज विश्वव्यापी बन्दै हाम्रो देशमा पनि फैलिरहेको छ । नश्वर शरीरको अमर अजर प्रेमको कहानी आज पनि हर प्रेमिल मनहरुको स्पन्दनमा स्पन्दित छ । तसर्थ प्रेमको शक्ति र सामाथ्र्य अपराजित र अप्रितम छ । आध्यात्मिक प्रेम जीवनको आदर्श हो । शैली हो । व्यबहार हो । जीवन शान्ति हो ।
प्रेम समर्पण हो, प्रेम त्याग हो, प्रेम विश्वास हो, प्रेम इज्जत र प्रतिष्ठा हो, प्रेममा पर्याप्तता कहिल्यै र कसैगरी हुँदैन, अपर्याप्तताको कारण नै प्रेमको खोजीमा मान्छे भौँतारिन्छ, प्रेमको याचना गर्छ, प्रेमको महत्त्व र गरिमा यसको अमरत्वसँग छ । सच्चा प्रेममा निष्ठा र नैतिकताले आँखा उघारेको हुन्छ । आध्यात्मिक ‘प्रेम’ शरीर र मनभन्दा माथिल्लो हो, जसको सम्बन्ध आत्मासँग हुन्छ । प्रेम जटिल हुनुहुँदैन समस्याग्रस्त बन्नु हुँदैन, प्रेम सरल र सहजानुभूतिले भरिएको हुनुपर्छ । प्रेम चित्त (सङ्कुचनमा) हैन व्यापक चैतन्यतामा बुझौँ, खोजौँ ।
तिमी छौ र न यो जिन्दगी सहज र सरल छ । प्रेम अन्तरहृदयको प्रतिध्वनि हो, मन मुटुको स्पर्श हो । यो साक्षत तर निराकार छ ।
प्रेम बजारमा सजाइएको बिक्री वितरणको आकर्षक वस्तु होइन । प्रेम अमूल्य र अतुलनीय छ, हुन्छ । प्रेम सर्वव्यापी छ, अमूल्य छ । निःसन्देह प्रेम पवित्र र चोखो अनि अजम्बरी थियो, छ, हुनेछ । शारीरिक आकर्षणभन्दा माथि उठेको प्रेम वास्तविक प्रेम हो । आत्मिक, भावनात्मक र सहृदयी । प्रेममा गणित हुँदैन । प्रेम स्वार्थको कारोबार होइन यो निःसर्त हुन्छ । स्वार्थको लेनदेन हिसाब किताब गरिने सम्बन्ध प्रेम होइन व्यापार हो । प्रेममा व्यापार होइन पूजा हुन्छ । परस्परमा समर्पण र त्याग हुन्छ । प्रेम अग्र्यानिक हुन्छ । कस्मेटिक प्रेम गर्ने समयमा सच्चा प्रेममा आकर्षण देखिन्न तर अग्र्यानिक प्रेमको निरन्तरता अटुट रहन्छ ।
निस्वार्थता नै प्रेमको एक मात्र स्वार्थ हो, निस्वार्थता नै सर्त हो । प्रेममा रूप, बैँस, धन सम्पत्ति, पद र प्रतिष्ठालाई प्राथमिकीकरण गरियो भने त्यो क्षणभङ्गुर र अल्पकालीन हुनेछ । अल्पकालीन प्रेम गलत वृत्ति हो । दीर्घकालीन प्रेम जीवनको सर्वस्व हो । आज प्रेम दिवस, प्रेमको अमरत्वको सङ्कल्प र कामना गर्ने दिन । प्रेमको भयानक युद्धमा सहिद हुनेहरुप्रति विशेष सहानुभूति, घायल, अङ्ग–भङ्ग, क्षत–विक्षत मन र मस्तिष्कहरुलाई शीघ्र स्वाथ्य लाभको कामना ! विजय र पराजयको सामना गर्ने अनि जय पराजयको कुनै पर्वाह नगर्ने प्रेमिल मनहरु, प्रेम सापेक्ष मन र प्रेम निरपेक्ष मनहरु सबै, सबैलाई प्रेम दिवसको शुभकामना !
प्रेम कुनै विशेष आग्रहका लागि नहोस्, जीवन र जगतको खातिर होस् । प्रेम पीडासँग होइन पवित्रतासँग मजबुत रहन्छ । प्रेमले लुकाउँदैन, नलुकाएपछि दुखाउँदैन पनि । प्रेम इतिहासमा पढिएका रोमियो जुलियट, लैला मज्नु, मुना मदनमा देख्ने–खोज्ने होइन । आफैँमा, आफ्नो प्रेममा खोज्नु र परिस्कार गर्नु जरुरी छ । प्रेम रुढता र जडतामा रहन्न । समय सापेक्ष हुन्छ तर यसको पवित्रता शरीरमा भन्दा बढी मनमा हुन्छ । प्रेमले अभावमा भाव पैदा गराउँछ र प्रेमलाई सुखद बनाउँछ । सच्चा प्रेमले परस्परमा हार्न–जित्न सहज मान्छ । सहजताको राजमार्गबाट प्रेम सहज रूपमा हिँड्न सक्छ ।
प्रेम सद्भाव र अनुराग प्रकट गर्न कुनै साइत, घडी र पलाको आवश्यकता पर्दैन । ३६५ दिन नै प्रेम व्यक्त गर्न सकिन्छ तर विशेष दिन सर्वव्यापी र सर्वमान्य दिनको महत्त्व झन छुट्टै र विशेष हुन्छ त्यसैले आजको दिन फेब्रअरी १४ प्रेमको मानक दिन हो । प्रेम मानवीय गुण र धर्म हो प्रेम विवाहसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो सृष्टि र प्राणीसँग अन्योन्यास्रित छ । प्रेम मानवतावाद हो । प्रेमले जात, धर्म, वर्ण उमेर र भूगोलको भेद गर्दैन । प्रेमले उत्साह भर्न सिकाउँछ । प्रेमले रुन होइन, हाँस्न प्रेरणा दिन्छ । प्रेम निर्भिक र निर्भय हुनुपर्छ । अतः अतीतलाई सम्झी नरोइरहनु तिमी, जति रोए नि भुल्नु त पर्दो रहेछ ! नओइलाउने मनको मखमली माया छ जुनी जुनीलाई ! बजार गर्माउने भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवसको हार्दिक हार्दिक शुभकामना प्रिय मान्छे लगायत सबै, सबैमा ।
कविता : सालिक
कविता : समय आउने छ !